Taratasy misokatra fanakianana an’i Sarkozy, avy amin’ireo Afrikàna mpanoratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Oktobra 2018 6:59 GMT
Tsy ela akory izay i Jean-Luc Raharimanana, malagasy mpanoratra malaza noho ireo asa vitany momba ny vanimpotoan'ny fanjanahantany frantsay, no nanoratra taratsy misokatra ho an'ny filoha frantsay, Nicolas Sarkozy ho valin'ilay kabary malaza ratsy ankehitriny nataony tao Dakar, Sénégal sy ilay hafany ho an'i Afrika sy ny Afrikàna.
Volana iray talohan'ny nivoahan'ny lahatsoratra teny frantsay nakàna ity voadika ho teny malagasy ity, nikabary i Sarkozy saingy ny fidonany kosa mbola manakoako any anatin'ny tontolon'ny bilaogy amin'ny teny frantsay. Na io noho ny politikany momba ny fifindramonina an-tsokosoko, na momba ny finamànany miharihary ami'ireo afrikana mpanao jadona, na ihany koa momba ireo fanamarihany niteraka resabe mikasika ireo frantsay vitsy an'isa, matetika i Sarkozy no toa mihantsy fanehoankevitra mahamay avy amin'ireo bilaogera miteny frantsay. Tsy nanova mihitsy an'io fomba fijery io ny kabary nataony tao Dakar.
Maro ireo afrikana mpanoratra sy bilaogera no niaraka nanao sonia an'ilay taratasin'i Raharimanana, ary navoaka tao amin'ny gazety «Libération ». Naverina navoaka ihany koa tao amin'ny bilaogin'ilay kôngôley mpanoratra, Alain Manbanckou sy tao amin'ny bilaogy malagasy roa malaza, Mialy sy Za Gasy.
Toy izao ny fanoloran'i Mialy an'ilay taratasy ho an'i Sarkozy :
“Maro ireo afrikàna mpanoratra no nanjohy an'i Raharimanana mba hamaly ilay “lesona kely momba ny teny frantsay” nataon'ny filoha Sarkozy, tao Dakar”
Alain Manbanckou manampy hanihany kely amin'ilay taratasy, nanaingo ilay taratasy misokatra taminà sariitatra iray ahitàna an'i Sarkozy miteny amin-jaza afrikàna iray hoe :
“Tianao i Frantsa, saingy handao azy ianao na izany aza.”
Harinjaka koa naneho hevitra narahana vazivazy momba ilay kabarin'i Sarkozy.
Ireto ny tsonga vitsivitsy avy tao amin'ilay taratasy misokatra nalefa ho an'i Sarkozy :
“[…] Satria rehefa miteny inao fa tsy dia tafiditra loatra ao anatin'ny tantara ny afrikàna, diso ianao. Tena tao anatin'ny tantara izahay fony nanova ny endrik'izao tontolo izao ny fanandevozana. Tena tao anatin'ny tantara izahay fony nifampizaran'i Eoropa ny tanibenay (kaontinanta). Tena tao anatin'ny tantara izahay fony nanao kisarisary ny ho endrik'izao tontolo izao hitantsika ankehitriny ny fanandevozana. Ny zavatra rehetra ananan'ny tontolo maoderina dia azony avy amin'izay nozakai'i Afrika, ary rehefa miteny aho hoe “ny tontolo maoderina”, tsy avahako hiala ao anatin'izany ny afrikàna izay toa ahilikao ho any anatin'ny fomba fahagola sy izay anganongano hafa tsy haiko any ary ny fibanjinana mahafinaritra ny natiora. Mba inona no tianao lazaina amin'ny hoe tantara ? Tsy tafidtra ao ve raha tsy ry zareo mpandresy? Aleo tantarainay anao kely io tantara io izay toa zara raha misy fantatrao. Ny rainay rehetra, tamin'ny alalan'ny tolona nataony dia tafiditra ao anatin'ny tantara nanohitra ny fanandevozana, ny rainay rehetra ireo noho ny fitroarany, dia nanery ireo firenena mpanandevo hanao sonia ny fanafoanana ny fanandevozana, ny rainay rehetra ireo tamin'ny fikomiany — fantatrao ve ny Sétif 1945, fantatrao ve ny Madagasikara 1947 ? no nanosika ireo firenena mpanjanaka hiala tamin'ny fanandevozana…[…] Diso ianao mampitovy ny anjara andraikitry ny afrikàna sy ny heloka bevava ary ny fanandevozana hitovy laharana, satria nisy avy aty aminay ny mpiray tsikombakomba, izay tsy inona fa nivoaka avy any amin'ireo fandraharahana tsy refesimandidy novolavolain'i Eoropa ihany, hatramin'ny oviana no nisy rafitra tsy refesimandidy ka tsy nanana mpiaramiasa taminy tao an-toerana? Satria ekena, ny fanandevozana sy fanjanahana dia rafitra tsy refesimandidy, ary diso ianao manandrana manamarina azy ireny amin'ny filazana ny andraikitray sy ny lafiny tsara hoe nentin'ny fanjanahana. Miantso “fahaterahambaovao afrikàna’ ianao, tongava aloha miresaka matotra sy tsy miolakolaka amin'ireo tena mpifampiresaka aminao, mikasika ireo tena mikatsaka marina amin'ny fomba matotra sy tsy miolakolaka an'io fahaterahambaovao io. Fantatray tanora afrikana fa izy ireny tsy manana anarana hoe Omar Bongo, Muammar al-Kadhafi, Denis Sassou Nguesso, Ravalomanana na ireo filoham-pirenena hafa nanambara samirery ny tenany ho demaokraty.
Miantso anao hiady hevitra izahay, manasa anao hifanakalo hevitra izahay. Amin'ny alàlan'ity taratasy misokatra ity, raisinay amin'ny vavanao ianao, atsaharo araka izany ny mifanerasera amin'ireo mpihady fasana mandevina ny fanantenanay ka tongava miresaka aminay [..]
Am-pahatsorana sy tsy miolakolaka.
Antananarivo, 3 aogositra 2007
Raharimanana sy ireo mpanoratra
Boubacar Boris Diop (Senegaly),
Abderrahman Beggar (Maraoka, Kanadà),
Patrice Nganang (Kamerona, Etazonia) Koulsy Lamko (Tchad),
Kangni Alem (oniversiten'i Lomé),
Afaka jerena manontolo ato ilay taratas.
Nisy mpamaky iray naneho hevitra tamin'ny lahatsoratra nosoratan'i Mabanckou ary manamafy fa mankasitraka ny hatezeran'ilay mpanoratra :
“Ny tena tiako amin'i Raharimanana, dia ny hatezerana. Misy ireo tsy voasakan'ny fieritreretana ny hoavin'i Afrika ny torimasony. Fa izy, tsapa matetika ao anatiny ny fahamangànana, ny ratram-po lalina izay nitondra ho azy ireo fivadibadihan-javatra tsy loabody momba ny hoavin'i Afrika”
Nanehoana hevitra tao anatin'ny gazety Le monde ilay kabary malazan'i Sarkozy momba ny fifandraisan'i Frantsa sy ny tanibe afrikàna. Tsonga:
“Nampahatsiahiviny ny fandàvany tsy hiditra amin'ny fanaovana fialantsiny, satria “tsy misy, na iza na iza, afaka hangataka amin'ny zanany lahy hanao fivalozana amin'ny hadisoana vitan'ny rainy”. Izany tokoa, “tsy nolavin'ny filoha ny fisian'ny heloka bevava sy hadisoana, satria tena nisy tokoa ny hadisoana ary nisy tokoa ny heloka bevava”. Niaraka tamin'ny teny tena mafonja noho ny hatrizay, nofaritany ho heloka bevava mifanohitra amin'ny maha-olona, amin'ny maha-olombelona “ny famarotana ireo mainty hoditra sy ny fanandevozana”
Ho an'ny filoha Frantsay, ao anatin'ny maripamantarana ny afrikana mihitsy no toa tsy maintsy karohana ny hisatra manimba ny fandrosoan'ilay tanibe : “Ny zavadozan'i Afrika, dia tsy tafiditra loatra ao anatin'ny Tantara ny afrikàna (…). Tsy mihazakazaka ho any amin'ny hoavy izy (…). Ao anatin'ity tontolo ity izay ny natiora no mifehy ny zavatra rehetra, tsy maha-hetsika ny olona eo afovoan'ny fandaminana iray izay efa voasoratra mialoha ny zavatra rehetra. (…) Tsy misy toerana ho an'ny kinangan'olombelona, na ho an'ny hevitra miresaka fandrosoana.”